सर्कल आराम: दैनिक कला पजल धोखाहरू&ह्याक – Android धोखा दिन्छ
सर्कल आराम: दैनिक कला पजल धोखाहरू&ह्याक
द्वारा प्रशासक | नोभेम्बर 28, 2021
सर्कल रिलक्स ब्लक पजलले सरल र लत लाग्ने क्लासिक स्लाइडर पजल प्रदान गर्दछ. पजल समाधान गर्न टाइल्स ट्याप वा स्लाइड गर्नुहोस्. सुन्दर इन-बिल्ट ट्रपिकल टापु चित्र प्रयोग गरेर खेल्नुहोस्, वा असीमित पजलहरू सिर्जना गर्नुहोस्. तपाइँ कति छिटो खेल पूरा गर्न सक्नुहुन्छ?
सर्कल आराम सुविधाहरू:
• खेल टाइमर र कौशल प्रगति मापन गर्न काउन्टर तथ्याङ्क चाल.
• नि: शुल्क पजल ग्यालेरी दैनिक अपडेट हुन्छ!
• धेरै 1000 सुन्दर उच्च परिभाषा पजलहरू!
• चित्रकारहरू द्वारा अद्वितीय कार्यहरू सहित नयाँ पजल प्याकहरू!
• इन-गेम पज प्रकार्य.
• धेरै कठिनाई स्तरहरू.
• एक पटकमा एक भन्दा बढी पजलहरूमा काम गर्नुहोस् र आफ्नो प्रगति हेर्नुहोस्!
• तपाईंलाई समाधान गर्न मद्दतको लागि समाप्त कला चित्रको पूर्वावलोकन गर्नुहोस्!
• टाइलहरू सजिलै र छिटो ठाउँमा सर्छ.
• वास्तविक जिगस पजल पेशेवरहरूको लागि रोटेशन मोड! समूहहरूमा टुक्राहरू सार्नुहोस्!
• उत्कृष्ट संगीत संग्रह: आफ्नो मूड अनुरूप सही संगीत संगत छनोट गर्नुहोस्!
• सरल नियन्त्रणहरूले जिगस पजलहरू समाधान गर्न सजिलो बनाउँदछ!
र त्यहाँ पत्ता लगाउन थप सुविधाहरू छन्! तपाईं सजिलै एक अद्वितीय व्यक्तिगत पहेली सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ! साथै तपाइँ तपाइँको आराम संग संगै इन-गेम संगीत संग्रहबाट तपाइँलाई मनपर्ने धुन छनोट गर्न सक्नुहुन्छ।, तनाव-मुक्त कला चित्र सत्र!
सर्कल रिलक्समा तपाईं विश्वभर यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, भव्य परिदृश्यहरू हेर्नुहोस्, वर्षको मौसमहरू र विश्वका आश्चर्यहरू अनुभव गर्नुहोस्, सबै आफ्नो घरको शान्ति र शान्तबाट.
हामीले तपाईंको मनपर्ने खेल जहाँ पनि र कुनै पनि समयमा खेल्न सम्भव बनाउनको लागि यो एप सिर्जना गरेका छौं. यसले वास्तविक नि: शुल्क जिगस पजलहरू र पूर्ण रूपमा अनुकरण गर्दछ, एउटै समयमा, एपले तपाइँको मनपर्ने खेलको खेललाई यो सम्भव भएको रूपमा सुविधाजनक बनाउनको लागि यसको सबै फाइदाहरू प्रयोग गर्दछ.
कोटि: धोखा दिन्छ र ह्याक वा सल्लाहहरू ट्यागहरू: Art, CheatsHack, Circle, Daily, पहेली, आराम
← पोपी प्लेटाइम हग्गी वग्गी – धोखा दिन्छ&ह्याक गरिब सर्प: तपाईं यसलाई धोखा मदत गर्न सक्नुहुन्छ&ह्याक →
The Way Home – Pixel Roguelike Cheats&ह्याक
Shot Online: Golf Battle – धोखा दिन्छ&ह्याक
Niffelheim – धोखा दिन्छ&ह्याक
FreezeTag Online – धोखा दिन्छ&ह्याक
DC Legends: Fight Superheroes – धोखा दिन्छ&ह्याक
Tiny Pixel Knight – Idle RPG Cheats&ह्याक
Taxi Run – Crazy Driver Cheats&ह्याक
EA SPORTS™ UFC® Mobile2धोखा दिन्छ&ह्याक
Transformation 3D – धोखा दिन्छ&ह्याक
Angry Birds Journey – धोखा दिन्छ&ह्याक